Taksiborosy “karandalana” tapaka hisatra : 5 no maty, 71 naratra | NewsMada
Taksiborosy “karandalana” tapaka hisatra : 5 no maty, 71 naratra
Par Taratra sur 11/05/2018
Nivadika teo am-pidirana ny tetezan’i Kamolandy, Maevatanàna, ny talata alina teo ny kamiaobe taksiborosy, irony antsoina hoe “karandalana” irony. Mpandeha dimy no namoy ny ainy. 71 hafa naratra, ka nisy no tena voa mafy.
Nitrangana lozam-piarakodia mahatsiravina indray tao amin’ny fokontany Kamolandy, kaominina ambanivohitra Andriba, distrikan’i Maevatanana PK 227 + 500, ny talata lasa teo tamin’ny 11 ora alina. Araka ny fampitam-baovao avy amin’ny zandary, kamiaobe Mercedes-Benz taksiborosy “karandalana” an’ny kaoperativa KOPFMM nitondra mpandeha miisa 77 hihazo an’i Sambava no nivadika vokatry ny olana teknika teo amin’ny hisatra. Tsy voafehin’ny mpamily intsony ilay taksiborosy ka nivadibadika tany anaty hantsana. Vokany, mpandeha miisa dimy indray maty tsy tra-drano (vehivavy ny iray amin’ireo) raha olona 71 naratra ka tena voa mafy ny roa amin’ireo, raha ny fanazavan’ny zandary hatrany. Nandriaka ny ra, hatairana ny an’ireo mpandeha raha nahita ny fiara nivadibadika. Nisy tamin’ireo niharam-boina no naratra mafy teo amin’ny lohany sy tapa-tanana aman-tongotra.
Tonga haingana teny an-toerana ireo zandary namoaka ireo niharam-boina tao anatin’ilay taksiborosy. Nanahirana ny famoahana ireo niharam-boina satria nosokirina tao ambanin’ilay fiara izy ireo. Nentina haingana nihazo ny hopitalin’i Maevatanana sy teny amin’ny HJRA ireo niharam-boina.
Efa nisy olana mialoha ilay taksiborosy…
Potika ilay kamiaobe taksiborosy. Potika teo amin’ny 80 isan-jato teo koa ny entan’ny mpandeha rehetra satria nipitipitika avy eny ambony fitoeran’entana.
Voalazan’ny mpandeha iray tamin’ity taksiborosy ity fa efa somary tsy ara-dalàna hatrany am-piaingana ity kamiaobe taksiborosy ity. Nisy fotoana nanamboatra izany ny mpamily sy ny mpanampy azy, saingy izao namoa-doza izao ihany.
Tonga namangy sy nanome fanampiana ireo niharam-boina teny amin’ny hopitaly HJRA, omaly ny minisitra mpiahy ny faritra Sava, i Zafilahy Ying Vah amin’ny anaran’ny fitondram-panjakana. Misy amin’ireo niharam-boina no mbola manaraka fitsaboana ao amin’ny hopitaly noho ny ratra nahazo azy. Manao fanadihadiana ity raharaha ity ny zandary avy ao amin’ny borigadin’Andriba sy ny borigady misahana ny lalana ao Maevatanana.
Tsy manaraka ny fenitra takin’ny fitateram-bahoaka itony fiara itony, saingy noho ny haratsian’ny lalana, tsy misy taksiborosy tonga any amin’ny faritra Sava raha tsy itony kamiaobe taksiborosy itony. Rahoviana no hamboarina iny lalana iny? Iandrasana fampielezan-kevitra?
Matetika itrangana lozam-piarakodia iny RN 4 iny. Tandrevaka ataon’ny mpamily hatrany ny mahatonga ny loza toy izao.